Mudaaharaadyo ka dhan ah Mactab Caabudka Ee AMISOM iyo xukuumada ridada uu hogaamiyo murtad shariif sh axmed laguna soo dhawaynayo guulihii Mujaahidiinta oo Muqdisho ka socdo. | Halganka Online
Mudaaharaadyo ka dhan ah Mactab Caabudka Ee AMISOM iyo xukuumada ridada uu hogaamiyo murtad shariif sh axmed laguna soo dhawaynayo guulihii Mujaahidiinta oo Muqdisho ka socdo.
Mudaaharaadyo balaaran oo ay sahcabka Muslimiinta ahi ku muujinayaan dareenkooda ku aadan Xasuuqa ka socda magaalada Muqdisho ayaa maanta ka socda deegaanno badan oo katirsan gobalka Banaadir.
Kumanaan qof oo u badan Haween iyo carruur ayaa saaka taag taagan wadooyinka magaalada Muqdisho deegaanad ay Mujaahidiintu maamulaan waxayna isku diyaarinayaan ka qayb qaadashada Mudaaharaadyada.
Mudaaharaadkan ayey shacabka Muslimiinta ahi ku cambaaraynayaan xasuuqyada ay ciidanka karishtanka ee AMISOM u gaysanayaan shacabka Soomaaliyeed halka dhanka kalena hambalyo iyo bogaadin loogu dirayo Mujaahidiita guulihii ay ka soo hooyeen dagaaladii dhawaan Muqdisho ka dhacay.
Wilaayada Islaamiga Banaadir ayaa siweyn u adkeeyey ammaanka si calooshood u shaqaystayaal taabacsan Black Water aysan dhibaato uga gaysan goobaha ay Shacabka Muslimiinta ah dareenkooda ku muujinayaan.
Shacabka maanta ku Mudaaharaadaya magaalada Muqdisho ayaa waxay isaga kala imaanayaan dhamaanba degmooyinka Muqdisho waxaana la arkayaa dad u badan Haween oo gaadiid ka soo qaadanaya deegaanad ay maamusho xukuumada ridada ee hogaanka murtad shariif.
« Sh Abu-Zubeyr Amiirka Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab oo ka hadlay xaaladihii ugu dabeeyey dagaalada Muqdisha ka socda Baaqna u diray reer Muqdisho iyo Mujaahidiinta.(Dhageyso). SomaliMeMo oo heshay shax Milateri oo ay dejisay AMISOM si ay ugu qabsato magaalada Muqdisho iyo ciidamo taabacsan DKMG-ka oo si qarsoodi ah ku jooga deegaanada ay Mujaahidiintu ka maamulaan magaalada Muqdisho.(Warbixin dheer oo Xasaasi ah). »